सिके दाइले त्यहाँ बोलेका शब्द ठ्याक्कै मलाई याद छैन। उहाँको भनाइको सार भने सम्झना छ। उहाँको आसय थियो– 'यो किताबको मुटु भनेको भाग तीन हो, जुन प्रशान्तले मनको गहिराइबाट लेखेका छन्, आफ्नो अनुभूतिबाट लेखेका छन्। त्यसबाहेक सबै सूचना र विश्लेषण हुन्, जुन आफ्नो पहुँच र क्षमताअनुसार जो कोहीले लेख्न सक्छ।'
‘म कक्षा ५ पुगेपछि मेरा अभिभावकले मलाई लोयला नामको नयाँ विद्यालयमा भर्ना गरिदिनुभयो। विद्यालयको पहिलो दिन नै मलाई अचम्भित बनाउन काफी भयो। हामी साझा मेसमा खाना खाँदै थियौं। मैले कक्षाकोठामा बिहानै देखेका तर बोल्न नपाएका दुई सहपाठी मेरो अघिल्तिर प्लेट लिएर उभिए। एक जनाले मेरो ठेगाना सोध्यो। मैले भनेँ, ‘काठमान्डु।’
चुपचाप खाना खाइरहेँ। मेरो थरको मजाक बनाइनु र मलाई इन्डियन भनिनुमा केही सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो।’
दिल्ली पुग्दा पनि समस्या भने उस्तै रह्यो। दिल्लीको सरदार पटेल विद्यालयमा मेरा सहपाठीले मसँग राखेको पहिलो जिज्ञासा काठमाडौंका साथीले राख्नेभन्दा फरक थिएन। उनीहरूले भने, ‘तिमी कसरी नेपाली भयौ? नेपालीजस्तो देखिँदैनौ त। कि तिमी बहादुर हौ? हाम्रो घरमा चौकिदार बस्ने एक नेपाली छन्।’
जातजातिको विविधताले समाजलाई रंगीन बनाउछ, त्यसको सुन्दरता बढाउँछ। तर, त्यो विविधताको पनि मूल्य हुन्छ। त्यस्तो समाजले चुकाउने मूल्य भनेको ‘रेसिजम्’ अर्थात नश्लवाद वा रंगभेद हो। मानिसलाई आफूजस्तै देखिने, आफूजस्तै बोल्ने, आफूजस्तै रीतिरिवाज र चालचलनको मानिस ठिक लाग्छ। सहज लाग्छ। आफूजस्तो नदेखिनेमा उसले केही न केही गडबडी देख्छ। हामी सबैमा धेरथोर नश्लवाद वा रंगभेदको अंश छ। त्यसको प्रयोग गर्ने क्षमता भने जहिले पनि सत्तासीन वा वर्चस्वशाली वर्गसँग धेरै हुन्छ। त्यही भएर अमेरिकामा गोराले कालामाथि, फ्रान्सको पेरिसमा ककेसियन युरोपियन फ्रेन्चले अरबमाथि, भारतको मुम्बईमा मराठीले बिहारीमाथि र काठमाडौंमा पहाडीयाले मधेसीमाथि यस्तो विभेद धेरै गर्छन्।
पहिलो, उनीहरूमाथि वर्ण, भाषा र संस्कृतिका हिसाबले विभेद छ। कालो वर्ण, मधेसमा बोलिने भाषाहरू, मधेसको लवाइखवाइ र संस्कृति काठमाडौंले खासै रुचाउँदैन। मधेसीमाथि योभन्दा अर्को गम्भीर तहको विभेद पनि छ- उसको नेपाली राष्ट्रप्रतिको बफादारीमा शंका गरिने विभेद। कुनै व्यक्ति जुन देशको नागरिक हो, त्यही देशप्रतिको बफादारीमा प्रश्न गरिएपछि उसको मनमा के बित्ला? वर्षौंसम्म त्यही प्रश्न तेर्सिएपछि, वर्षौंसम्म शंकाको घेरामा परेपछि उसले आजित भएर के सोच्ला?
मलाई थाहा छ, यो लेख पढिरहनुभएका धेरैलाई मनमा लागिरहेको होला, म त त्यस्तो गर्दिनँ, मैले त त्यसो गरेकै छैन। आजकाल त मधेसीप्रति त्यस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति लगभग हराइसक्यो। विभेदमा परेकासँग हामीले कुरा गर्ने र व्यवहार गर्ने दुई तरिका हुन्छन् — हामी विभेदमा परेको वा छुवाछुतमा परेकालाई म त विभेद गर्दिनँ, म त छुवाछुत गर्दिनँ भनेर टक्टकिन सक्छौं। वा, समभावका साथ भन्न सक्छौं, यो मुलुकमा मधेसी, दलित वा अरू धेरै समुदायप्रति विभेद र थिचोमिचो भएको पक्का हो। मैले वा मेरा पुर्खाले जानी–नजानी त्यो विभेद गर्यौं होला, म त्यसको निम्ति क्षमा चाहन्छु। र, अबदेखि म विभेद नगर्नेमा प्रतिबद्ध छु। विभेदको स्विकारोक्तिले मात्र पनि आत्मसम्मानमा ठेस पुगेकाहरूको पीडा त्यसै आधा कम हुन्छ।
मैले ‘कश्मिरको बाटो– भाग १’ मै लेखेको थिएँ, भाग २ मा एमालेले अहिले खेलिरहेको भूमिकाबारे केही टिप्पणी र केही प्रश्न गर्नेछु भनेर। सुरु गरौं, एमाले नेताका केही भनाइबाट।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एकपटक भने, ‘समथर भागजति देख्नै नहुने, सबै मधेस प्रदेश बनाउनुपर्ने, त्यसो भए युपी–बिहार पनि मिसाउने?’ त्यसैगरी एमालेका पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, ‘के धोतीजस्तो लामो प्रदेश बनाउने?’
कहिलेकाहीँ असावधानीवश यस्ता शब्द निस्कन्छन्। त्यस्तो बेला मानिसको चित्त दुख्यो भने ‘सरी’ भन्ने हो। आफ्नो त्यस्तो नियत नभएको प्रस्ट्याउने हो। र, भविष्यमा सावधानी अपनाउने हो। तर, एमाले नेताहरूबाट किन बारम्बार यस्ता अभिव्यक्ति आउँछन्? संविधान जारी हुनुअघि र पछि पनि मधेसमा संविधानबारे ठूलो असन्तुष्टि देखियो। संविधानको विरोधमा भएको आन्दोलनमा करिब ५० जना मधेसीको ज्यान गयो। मधेस आन्दोलन क्रममा त्यतिबेला उठेको उछालको अवतरण कसरी गर्ने भन्ने नै अहिलेको मूल राजनीतिक चुनौति हो। काठमाडौंमा सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै केही महिनाअघि ओलीले भने, ‘मधेसमा कहाँ छ आन्दोलन? मधेसमा बितन्डा थियो, म सरकारमा आउनेबित्तिकै सकियो। त्यसपछि मधेसी मोर्चाले केही दिन काठमाडौंको खुलामञ्चमा प्यारोडी चलायो, त्यो पनि बन्द भयो।’
संविधान जारी गर्नुअघि र पछि पनि मधेसमा आन्दोलन थियो। अन्तिम समयमा आएर संविधान जारी गर्न चार–पाँच दिन पर्खिन र मधेसी पार्टीलाई पनि सँगै ल्याएर संविधान जारी गर्ने कि पहिले जारी गरेर त्यसपछि संशोधनमार्फत् असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने भन्ने विवाद भयो। केही दिन पर्खौं भन्नेमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा कांग्रेसका केही मन्त्री थिए। अहिले नै गरौं, संशोधन गर्दै जाउँला भन्नेमा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत थिए। अन्ततः अहिले नै जारी गरौं, रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने मतले जित्यो। र, संविधान जारी भयो। तर, संविधान जारी हुनुपूर्व नै तीन शीर्ष पार्टीका तीन नेताले विज्ञप्ति जारी गरेर असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसदमै उभिएर संशोधनको प्रतिबद्धता जारी गरे। पहिलो संशोधन प्रस्ताव कोइराला सरकारले नै दर्ता गर्यो। त्यो संशोधनले मात्र पर्याप्त नभएपछि ओली सरकारले पनि संशोधन अघि बढाउन गृहकार्य गर्यो। संविधान संशोधनका लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक कमल थापाले सोमबार मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मेरै नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएको थियो। त्यतिबेला सीमांकनसहित सबै विषयमा संशोधन गर्ने गरी मैले प्रस्ताव तयार पारेको थिएँ। त्यसमा ओलीजीको पनि समर्थन थियो, उहाकै निर्देशनमा मैले प्रस्ताव तयार पारेको थिएँ, अहिले आएर दोहोरो चरित्र देखाउने काम भइरहेको छ।’
अहिले संशोधनमा पाँच नम्बर प्रदेशको नक्सा जे प्रस्ताव गरिएको छ, कांग्रेस–एमालेले संयुक्त रूपमा बनाएको नक्सामा पनि यिनै जिल्लाहरू थिए। कि एमालेले भन्नुपर्यो, त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भन्ने थाहा हुदाँहुदै हामीले स्वीकार गरेका हौं। कि भन्नुपर्यो, त्यतिखेर हामीलाई थाहा नभएका केही नयाँ तथ्य बाहिर आए, जसले यो सीमांकन राष्ट्रघाती रहेछ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं, त्यसैले हामी यो प्रस्तावविरुद्ध छौं। तर, त्यसो हो भने ती नयाँ तथ्य के हुन् भनेर एमालेले नेपाली नागरिकलाई भन्नुपर्यो। एमालेले बरु यसो भन्न सक्थ्यो, एकपटक सीमांकन टुंगो लागिसक्यो, अब नचलाऔं। पाँच नम्बरका जनताले मान्दैनन्। फेरि अरूतिरका जनता पनि भड्किन सक्छन्, संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ। त्यो बरु मुनासिब तर्क हुन्थ्यो। सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमालेको प्रयत्न अरू सबै राष्ट्रघाती, आफू मात्र राष्ट्रवादी भन्ने देखाउनमै केन्द्रित छ। कटवाल प्रकरणपछि सत्ताबाट ओर्लिएको एमाओवादीले एक वर्षभन्दा बढी समय त्यही प्रयत्नमा बर्बाद गर्यो। माधव नेपालले नेतृत्व गरेको सरकारलाई वर्षभरि ‘कठपुतली’ सरकार भनिरह्यो। पार्टी बाहिरबाट र भित्र पनि ‘राष्ट्रघाती’ को आरोप थेग्दै पाकेको पार्टी हो एमाले। महाकाली सन्धिताका नेताहरू ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रघाती’ कित्तामा उभिएपछि एमाले फुट्यो। त्यतिखेर पार्टी फुटेपछि मालेका नेताहरूले एमालेका क–कसले राष्ट्रघात गरे भनेर किताब नै निकाले। किताबका प्रति अहिले पनि मानिसका दराजमा सुरक्षित नै छन्। त्यतिबेला राष्ट्रघाती भनेर आफ्नै नेताहरूको नाम किटेर लेख्ने र पुस्तकमा नाम लेखिनेहरू आज एउटै मञ्चमा बसेर अरूलाई राष्ट्रघाती भनेर आरोप लगाइरहँदा यो आरोप कति क्षणिक हो भनेर सम्झिए हुने! यो मुलुकमा एमाले एक्लै राष्ट्रवादी र अरू सबै शक्ति कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र सबै मधेसवादी पार्टी ‘राष्ट्रघाती’ हुन् भने एमाले त के पशुपतिनाथले पनि यो मुलकलाई बचाउन सक्दैनन्। सत्ताबाट ओर्लिनुपरेको प्रतिशोधमा एमालेको ऊर्जाले नकारात्मक मोड धेरै लियो कि भन्ने लाग्छ मलाई। एमालेले थामिएर आफैंलाई हेरोस्, समीक्षा गरोस्। आज पनि यो मुलुकको सबैभन्दा तेजिलो पार्टी हो एमाले। सबैभन्दा चुस्त संगठन छ। खट्ने र दुःख गर्ने कार्यकर्ता मुलुकभर छन्। नाकाबन्दी बेला भारतसँग नझुकेको जस छ एमालेसँग। चीनसँग दुरगामी महत्वका सम्झौता र समझदारी अघि बढाएको जस छ। भारतसँग शिर नझुकाई उभिएका केपी ओली अझै यसको नेतृत्वमा छन्। मुलुकमा आन्तरिक एकता सुदृढ पारेर समृद्धिको उडान भर्न पखेटा तन्काउनुको साटो भुइँमा लड्न नंग्रा तिखार्न किन अभिषप्त छ एमाले। उसले यसको आफैं समीक्षा गरोस्।
हामी अहिले यति धेरै समयको चेपुवामा परिसक्यौं, स्थानीय चुनाव हुन ६० दिन बाँकी छ। चुनाव रोक्न मोर्चाले अल्टिमेटम दिएको छ। मैले ‘कश्मिरको बाटो– भाग १’ मै लेखेको छु, यो मुलकमा अब कुनै पनि हालतमा चुनाव रोकिनु हुन्न। मोर्चाले दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव रोक्न सफल भयो र मुलकका अरू भागमा मात्र चुनाव भयो भने त्यो दुई नम्बर प्रदेशका लागि ‘कश्मिरको बाटो’ हुनेछ। अस्थिरता र अशान्तिको अन्त्यहिन बाटो। र, दुई नम्बर प्रदेशबिना चुनावमा जानै हुन्न भन्ने हो भने हामीले बुझ्नुपर्छ, अन्ततः त्यसले हामीलाई अफगानिस्तानको बाटोमा पुर्याउनेछ।
राजाको शासन, कम्युनिस्ट शासन र अरू सबै शासनको प्रयोगले मुलुकलाई स्थिरता, शान्ति र विकास दिन नसकेपछि विस्तारै हामी २१ औं शताब्दीका ‘ग्रेट पावरहरूको’ स्वार्थको शिकार बन्नेछौं। त्यो बेला विदेशी शक्तिले हामीलाई मधेसी, पहाडीया, कांग्रेस, कम्युनिस्ट भनेर निगाहा देखाउने छैन। ढिला भैसकेपछि हामीले थाहा पाउनेछौं, मधेसी र पहाडीया भन्दै कति बेतुकको झगडा गरेछौं! २०४७ सालमा मुलुकको शासन राजाको हातबाट पार्टीहरूको हातमा आउँदा हाम्रो सपना सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड थियो। २५ वर्षपछि हामी भुटानलाई पनि नभेट्ने स्थितिमा पुगेका छौं। भुटान विकास, स्थायित्व र स्वाधीनताको बाटोमा रफ्तारसँग अघि बढेको छ। आज तात्कालिक मुद्दा गिजोलेर पार्टीहरू एकअर्कालाई दोषारोपण गर्न तम्सिएका छन्। फर्किएर पछिल्लो २५ वर्षको यात्रा हेर्ने हो भने सबैले आफूलाई दोषी पाउने छन्। त्यसैले, हामी सबै एकठाउँ उभिऔं। हिजोका गल्तीका लागि एकअर्काप्रति क्षमाशील बनौं। पार्टीहरूले जे भन्नुपर्छ भनौं, राज्यले जे भन्नुपर्छ भनौं। मधेस आन्दोलनताका राज्यले धेरै बल प्रयोग गरेकोमा माफी मागौं। आफ्नै मुलुकविरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दी समर्थन गरेकोमा पनि माफी मागौं। अरू पनि जे–जस्ता विषय छन्, तिनलाई टुंग्याएर अघि बढौं।
अब विगतको गल्ती स्विकार्ने र आत्मविश्वासका साथ नेपाली समाजलाई अघि बढाउने समय आएको छ। मधेसी नेताहरूले पनि सानो मन नपारौं। मैले यो लेखको भाग १ मा विस्तृतमा चर्चा गरेको छु– हामीले समावेशीका दृष्टिले अहिलेसम्म गरेको सामाजिक इन्जिनियरिङ कम महत्वको छैन। कम मुलुकले मात्र हामीले जत्तिको समावेशी समाजका प्रबन्धहरू कार्यान्वयन गरेका छन्। सामाजिक व्यवहार पनि विस्तारै बदलिँदै छ। सबै मिलेर त्यसलाई अझै तीव्र बनाऔं। मधेस आन्दोलन बेला सिके दाइले बानेश्वरमा हिन्दीमा गरेको एउटा भाषणको अंश मलाई याद छ।
लोकतन्त्रको बाटो, समावेशी र सबैको आत्मसम्मानको बाटो अगाडि जाने हो।
मंगलबार, चैत्र १, २०७३ १८:५३:१९